पूर्व पार्टनरको बारेमा सोच्न रोक्न के गर्ने | बेजिया
पूर्व पार्टनरको बारेमा सोच्न रोक्न के गर्ने?
मारिया जोस रोल्डन | 21/06/2022 22:59 | सम्बन्ध
सम्बन्ध अन्त्य गर्न सजिलो वा सरल छैन। पृष्ठ पल्टाउनु धेरै व्यक्तिहरूको लागि गाह्रो समय हो, विशेष गरी जब तपाईं दिनभर आफ्नो पूर्व-साझेदारको बारेमा सोच्न छोड्नु हुन्न। यसका लागि दु:खका विभिन्न चरणहरू पार गरी जीवनलाई उत्तम तरिकाले पुनर्निर्माण गर्न सक्षम हुनु महत्त्वपूर्ण छ।
निम्न लेखमा हामी तपाईंलाई दिनेछौं दिशानिर्देशहरूको एक श्रृंखला जसले तपाइँलाई तपाइँको भूतपूर्व पार्टनर बिर्सन मद्दत गर्न सक्छ।
1 शोकको लयलाई सम्मान गर्नुहोस्
2 भावनाहरू वैध र आवश्यक छन्
3 केहि खोज्नुहोस् जसले तपाईंलाई भ्रम भर्छ
4 तपाईंले पृष्ठ पल्टाउनु पर्छ र पूर्व साझेदारको बारेमा बिर्सनु पर्छ
5 एक पेशेवर जानुहोस्
शोकको लयलाई सम्मान गर्नुहोस्
धेरै अवसरहरूमा, भूतपूर्व पार्टनरको बारेमा सोच्न बन्द गर्ने विचार थोपाएर ठूलो गल्ती गरिन्छ। यो सामान्य छ कि यो सोच्न रोक्न गाह्रो छ र यो प्राप्त गर्न को लागी केहि समय लाग्ने छ। शोकको लयलाई कसरी सम्मान गर्ने जान्नुपर्छ र समय नआएसम्म धैर्य गर्नुहोस् जब पहिलेको साझेदारको बारेमा कुनै विचार छैन।
भावनाहरू वैध र आवश्यक छन्
तपाईंको पार्टनरसँग ब्रेकअपले सबै प्रकारका भावनाहरूको श्रृंखला निम्त्याउँछ, उदासी देखि लालसा वा अपराध सम्म। यस प्रकारका भावनाहरू आउनु सामान्य हो र यसैले तिनीहरूलाई प्रमाणीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण छ। पृष्ठ पल्टाउने र ब्रेकअप अन्त्य गर्ने कुरामा त्यस्ता भावनाहरूलाई अनुमति दिनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
केहि खोज्नुहोस् जसले तपाईंलाई भ्रम भर्छ
हराएको भ्रम फिर्ता गर्न सक्ने केहि खोज्नु महत्त्वपूर्ण छ। पुरानो पार्टनरको बारेमा सोच्न रोक्न र दिन प्रतिदिन आशावादी र सकारात्मकताका साथ बाँच्नका लागि जे पनि हुन्छ। केहि शौक वा चासोहरु संग आफैलाई विचलित गर्न को लागी तपाईलाई मूड मा रहन र जीवन को मजा लिन को लागी अनुमति दिनेछ।
तपाईंले पृष्ठ पल्टाउनु पर्छ र पूर्व साझेदारको बारेमा बिर्सनु पर्छ
तपाईलाई थाहा छ कि कसरी पृष्ठ पल्टाउने र चक्र समाप्त भएको छ भनेर सचेत हुनुपर्दछ। यो गर्नका लागि, एक प्रतीकात्मक अनुष्ठान प्रदर्शन गर्न सकिन्छ र सम्बन्ध निश्चित रूपमा पूर्व साझेदारसँग काटिन्छ। अनुष्ठान कुञ्जी हो जब यो व्यक्तिको बारेमा सोच्न रोक्न र नयाँ जीवनको आनन्द लिन सक्षम हुन आउँछ।
एक पेशेवर जानुहोस्
आवश्यक भएमा, तपाईं मद्दतको लागि एक पेशेवर सोध्न सक्नुहुन्छ। धेरै व्यक्तिहरू आफ्नै पूर्व पार्टनरसँग सम्बन्ध काट्न सक्षम छैनन् र उनीहरूलाई पेशेवरको मद्दत चाहिन्छ। कुनै पनि मद्दत थोरै हुन्छ जब यो ब्रेकअप स्वीकार गर्न र पूर्व पार्टनरको बारेमा कुनै पनि प्रकारको विचारबाट जोगिनको लागि आउँदछ।
छोटकरीमा, पूर्व साझेदारको बारेमा सोच्न रोक्न सजिलो छैन। प्रत्येक व्यक्ति फरक छ, त्यसैले विभिन्न भावनाहरूलाई कसरी प्रमाणित गर्ने र समयलाई सबै घाउहरू निको पार्नु महत्त्वपूर्ण छ। यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाइँ तपाइँको पुरानो साझेदार को बारे मा सोच्न को लागी एक नकारात्मक तरीकाले आफैलाई न्याय गर्न को लागी र सबै सम्भव गर्न को लागी गर्न को लागी दुखाइ समय संग रहदैन। कहिलेकाहीँ आफैलाई चिन्ह लगाउन वा निश्चित लक्ष्यहरू सेट गर्नाले तपाईंलाई शोक हटाउन मद्दत गर्न सक्छ। यदि तपाइँ आफ्नो टाउकोबाट त्यस्ता विचारहरू हटाउन सक्षम हुनुहुन्न भने एक पेशेवरमा जान सम्झनुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » मनोविज्ञान र जोडी » सम्बन्ध » पूर्व पार्टनरको बारेमा सोच्न रोक्न के गर्ने?
स्पेनमा डेटिङ एपहरू बढ्न जारी छ
तपाईंको पछाडिको हेरचाह गर्न बलियो ग्लुट्स